Fanamarihana mena iraisan'ny INTERPOL 6 sy izay azonao atao momba azy ireo | Law Firms Dubai
Fanamarihana mena iraisan'ny INTERPOL 6 sy izay azonao atao momba azy ireo
Lisitry ny fanamarihana mena INTERPOL
Mety ho olana lehibe ny ady amin'ny heloka bevava manerana ny fari-pirenena. Soa ihany, ny INTERPOL nandritra ny taona maro dia nanaporofo ny tenany fa tena tsara tamin'ny ady amin'ny heloka bevava natao nanerana ny faritry ny firenena.
Amin'ny alàlan'ny tsindry iray bokotra, ny INTERPOL dia afaka mahazo sy mizara ny fampahalalana sy data rehetra ilaina amin'ny fisamborana vonjimaika ny olona voalaza fa mpanao heloka bevava, na any ivelany na any ivelany. Ity fampahalalana sy angon-drakitra ity dia zaraina amin'ny fanjakana mpikambana amin'ny endriny fanamarihana misy loko miloko.
Ary amin'ireo fanamarihana INTERPOL fito fantatra amin'ny firenena rehetra, ny fampandrenesana mena no mafy indrindra ary indrisy, no be fanararaotana indrindra. Raha ny marina dia voarohirohy ho nanararaotra ity fampandrenesana ity ny fikambanana ary nampiasa azy io mba hanisy lisitra mainty ny olona ambony tsy misy fanamarinana.
Tokony hitranga ve izany? Amin'ity lahatsoratra ity dia ho azonao ny atao hoe fanaovan-taratasy mena sy ny fomba hiarovanao tena raha misy fampandrenesana mena tsy ara-drariny navoaka hamelezana anao.
Inona no atao hoe Fanamarihana Mena?
Ny fampandrenesana mena dia fampandrenesana fiambenana. Mangataka amin'ny mpampihatra lalàna iraisam-pirenena manerantany ny hisamborana vonjimaika amina olona voalaza fa meloka. Izy ireo dia manao an'io fisamborana vonjimaika io mandra-pahatongan'ny fametraham-pialana, ny famoahana olona na ny hetsika ara-dalàna hafa.
Amin'ny ankapobeny ny INTERPOL dia manome izany fampandrenesana izany amin'ny baikon'ny firenena mpikambana. Ity firenena ity dia tsy voatery ho firenena fonenan'ny ahiahiana. Na izany aza, tsy maintsy io no firenena nanaovana ny asa ratsy.
Ny famoahana ny doka mena dia tanterahina miaraka amin'ny lanjany lehibe indrindra manerana ny firenena. Midika izany fa fandrahonana ho an'ny filaminam-bahoaka ilay olona voarohirohy ary tokony horaisina toy izany.
Ny fampandrenesana mena anefa dia tsy didy fampisamborana iraisam-pirenena. Fanamarihan'ny olona tadiavina fotsiny izany. Izany dia satria ny INTERPOL dia tsy afaka manery ny mpampihatra lalàna any amin'ny firenena mba hisambotra olona iray izay foto-kevitra mena
Ny fanjakana mpikambana tsirairay dia manapa-kevitra hoe inona ny lanja ara-dalàna apetrany amin'ny Filazana Mena sy ny fahefan'ny manampahefana mpampihatra lalàna azy ireo amin'ny fisamborana.
Anisan'ireo fampandrenesana mena marobe navoaka hamelezana olona iray, ny sasany miavaka. Ny ankamaroan'ireo fanamarihana ireo dia notohanan'ny antony ara-politika na nanala baraka ilay olona resahina. Ny sasany amin'ireo fanamarihana mena malaza indrindra dia anisany:
# 1. Fangatahana fanamarihana mena hisamborana an'i Pancho Campo nataon'ny mpiara-miasa aminy Dubai
Pancho Campo dia matihanina amin'ny tenisy Espaniola ary mpandraharaha manana orinasa marin-toerana any Italia sy Russia. Raha handeha hitsangatsangana izy dia notazonina tao amin'ny seranam-piaramanidina amerikana ary noroahina noho ny antony namoahana azy ny fampandrenesana mena avy any UAE.
Ity fampandrenesana mena ity dia navoaka noho ny fifanolanana teo aminy sy ny mpiara-miasa taloha tany Dubai.
Ilay mpiara-miasa dia niampanga an'i Campo ho nanidy ny orinasany nefa tsy nahazo alalana taminy. Nahatonga ny fitsarana natao izany tamin'ny fotoana tsy naha teo azy. Farany dia nanambara ny fitsarana fa meloka izy ary namoaka fanamarihana mena tamin'ny alàlan'ny INTERPOL hiampangana azy.
Na izany aza, niady tamin'ity raharaha ity izy ary nanavotra ny sariny taorian'ny ady 14 taona.
# 2. Ny fitazonana an'i Hakeem Al-Araibi
Hakeem Al-Araibi dia mpilalao baolina kitra taloha ho an'i Bahrain ary nahazo fanamarihana mena avy any Bahrain tamin'ny taona 2018. Ity fampandrenesana mena ity dia nifanohitra tamin'ny fitsipiky ny INTERPOL.
Araka ny lalàna mifehy azy dia tsy misy fampandrenesana mena omena ireo mpitsoa-ponenana amin'ny anaran'ny firenena nandosiran'izy ireo. Araka izany, tsy nahagaga raha nahita ny hatezeram-bahoaka ny famoahana ilay fampandrenesana mena manohitra an'i Al-Araibi satria nandositra ny governemanta Bahraini izy.
Tamin'ny farany, nesorina ilay fampandrenesana mena tamin'ny taona 2019.
# 3. Ny fangatahana fampandrenesana mena momba ny fisamborana sy fampodiana an'i Donald Trump- filohan'i Etazonia teo aloha
Ny governemanta Iraniana dia namoaka fampandrenesana mena manohitra ny filoham-pirenena amerikana, Donald Trump, tamin'ny Janoary 2021. Nivoaka ity fampandrenesana ity hanenjehana azy noho ny famonoana ny jeneraly Iraniana Qassem Soleimani.
Ny fampandrenesana mena dia navoaka voalohany rehefa teo amin'ny seza izy ary avy eo nanavao indray rehefa nidina avy tany amin'ny birao izy.
Na izany aza, nolavin'ny INTERPOL ny fangatahan'i Iran fampandrenesana mena an'i Trump. Nahatanteraka izany satria ny lalàm-panorenany dia mametra mazava ny INTERPOL tsy hiditra amina raharaha misy ambadika politika, miaramila, fivavahana, na firazanana.
# 4. Ny fangatahana fampandrenesana mena an'ny governemanta rosiana hisamborana an'i William Felix Browder
Tamin'ny 2013, nanandrana naka ny INTERPOL ny governemanta rosiana hamoaka fampandrenesana mena manohitra ny CEO an'ny Hermitage Holding Company, William Felix Browder.
Talohan'izay dia nifanditra tamin'ny governemanta rosiana i Browder taorian'ny nametrahany azy ireo noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny fitondrana tsy mendrika ny namana sy mpiara-miasa aminy Sergei Magnitsky.
Magnitsky no lohan'ny fampiharana hetra tao amin'ny Fireplace Duncan, orinasa iray fananan'i Browder. Nametraka fitoriana tamin'ny tompon'andraikitra rosiana anatiny izy noho ny fampiasana tsy ara-dalàna ny anaran'ny orinasa noho ny asa fisolokiana.
Nosamborina tao an-tranony i Magnitsky taorian'izay, notazonina ary nokapohin'ny tompon'andraikitra. Maty izy taona vitsivitsy taty aoriana.
Nanomboka ny ady nataony tamin'ny tsy rariny nanjo ny sakaizany i Browder avy eo, ka noroahin'i Russia hivoaka ny firenena izy ary nalainy ny orinasany.
Taorian'izany, ny governemanta rosiana dia nanandrana nametraka an'i Browder tamin'ny fampandrenesana mena noho ny fiampangana ny hetra hialana hetra. Na izany aza, nolavin'ny INTERPOL ny fangatahana satria ny antony politika no nanohana azy.
# 5. Ny fangatahana fampandrenesana Mena Okrainiana momba ny fisamborana ny governora Okrainiana teo aloha, Viktor Yanukovych
Tamin'ny 2015, INTERPOL dia namoaka fampandrenesana mena manohitra ny filoham-pirenena teo aloha ao Ukraine, Viktor Yanukovych. Izany dia noho ny fangatahan'ny governemanta Okrainiana noho ny fiampangana ny fanodinkodinam-bola sy ny asa ratsy ara-bola.
Herintaona talohan'io dia nesorina tamin'ny governemanta i Yanukovych noho ny fifandonana nisy teo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana, izay nitarika fahafatesan'olona maro. Nandositra tany Russia izy avy eo.
Ary tamin'ny volana Janoary 2019, notsaraina izy ary voaheloka higadra telo ambin'ny folo taona tamin'ny tsy naha teo azy ny fitsarana Okrainiana.
# 6. Fangatahana fampandrenesana mena an'i Torkia hisamborana an'i Enes Kanter
Tamin'ny volana Janoary 2019, nangataka fampandrenesana mena ho an'i Enes Kanter, foibe Portland Trail Blazers, ny manampahefana Tiorka, miampanga azy ho manana fifandraisana amin'ny fikambanana mpampihorohoro. Notanisain'ireo tompon'andraikitra ny fifandraisany tamin'i Fethullah Gulen, mpitondra fivavahana silamo natao sesitany. Notohizan'izy ireo ny fiampangana an'i Kanter ho nanome fanampiana ara-bola ny vondrona Gulen.
Ny fandrahonana fisamborana dia nanakana an'i Kanter tsy hiala tany Etazonia noho ny tahotra sao ho voasambotra izy. Na izany aza, nolaviny ny filazan'i Torkia, tamin'ny filazany fa tsy misy porofo manamarina izany.
Inona no hatao rehefa namoaka fanamarihana mena ny INTERPOL
Mety hanimba ny lazanao, ny asanao ary ny orinasanao ny fanananao fampandrenesana mena navoaka hamelezana anao. Na izany aza, amin'ny fanampiana mety dia azonao atao ny manaparitaka ny fampandrenesana mena. Ireto misy dingana tokony horaisina rehefa namoaka filazana mena ianao:
Mifandraisa amin'ny vaomiera misahana ny fanaraha-maso ireo rakitra INTERPOL (CCF). Manan-jo hiditra amin'ny angona rehetra ananan'ny INTERPOL momba anao ao anaty rakitrao ianao.
Mifandraisa amin'ny tompon'andraikitra ara-pitsarana ao amin'ny firenena izay namoahana ilay fampandrenesana mba hanesorana ilay fampandrenesana.
Raha miorina amin'ny tsy fahampian'ny antony ilay fampandrenesana dia azonao atao ny mangataka amin'ny alàlan'ny manampahefana ao amin'ny firenena onenananao ny hamafana ny mombamomba anao ao amin'ny tobin'ny INTERPOL.
Ny tsirairay amin'ireo dingana ireo dia mety ho sarotra tanterahina raha tsy misy fanampian'ny mpisolovava mahay. Ary noho izany, isika, amin'ny Mpisolo vava Amal Khamis, dia mahafeno fepetra ary vonona hanampy anao amin'ny dingana rehetra amin'ny dingana mandra-panadio ny anaranao.
Ny tranga ara-dalàna misy ny fanamarihana mena ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra dia tokony hokarakaraina am-pitandremana sy fahaizana manokana. Mitaky mpisolovava manana traikefa lehibe momba izany izy ireo. Ny mpisolovava mpiaro ny heloka bevava mahazatra dia mety tsy manana ny fahaiza-manao sy traikefa ilaina amin'ny fikirakirana izany raharaha izany.
Soa ihany, ireo mpisolovava iraisam-pirenena mpiaro ny heloka bevava ao Mpisolo vava Amal Khamis manana izay tena ilainy. Izahay dia manolo-tena hanome antoka fa ny zon'ny mpanjifanay dia tsy voahitsakitsaka noho ny antony. Vonona hijoro ho an'ny mpanjifanay izahay ary hiaro azy ireo. Izahay dia manome anao ny solontena tsara indrindra amin'ny raharaha heloka bevava iraisam-pirenena miaraka amina manokana momba ny raharaha Filazana Mena.
Ny fanananay manokana dia misy fa tsy voafetra amin'ny: Ny specialisedanay dia misy: ny lalàna iraisam-pirenena momba ny heloka bevava, ny extradition, ny fifanampiana ara-dalàna, ny fanampiana ara-pitsarana ary ny lalàna iraisam-pirenena.
Ka raha manana naoty mena navoakanao ianao na ny olon-tianao dia afaka manampy izahay. Mifandraisa aminay anio!